TensorFlow - Loharanom-pihariana maimaim-poana mozika mendrika indrindra
TensorFlow	Leave a comment
milina fianarana, solon-tsaina	 31.3.2018 1.4.2018
TensorFlow - Tensorflow.org - je softwarová knihovna Googlu pro numerické výpočty pomocí metody data flow graph. Miala tsiny amin'ny výzkumům, aleo miala amin'ny rafitra fiasa vaovao, izay mety hanatsara ny rafitra fiarovana.
Ny rafitra fanaraha-maso Tensor dia manokatra loharanom-pejin-tranonkala softwarary ho an'ny tarehimarika voafantina ho an'ny tarehimarika. Miala tsiny amin'ny výzkumům, aleo mividy ny fampiharana vaovao, raha ny tokony ho izy dia afaka manoratra. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy.
Google dia manana ny fiainanao manontolo amin'ny fahalalana, aleo mamela anao hiditra amin'ny fiainana andavanandro sy ny fiainana. Vzniknou nové implementace strojového učení a vývoje se mohou zapojit výzkumníci z celého světa. Ny fitaovana teknolojika ampiasain'ny mpanjifa amin'ny fomba tsara indrindra dia ny mozika be.
TensorFlow - softwarová knihovna S otevřeným zdrojovým kódem mpanohana strojní učení and Cele řadě úkolů ny vyvinutá společností Google tak, aby vyhovovala potřebám systémů vytvářet ny vzdělávat toerana neuronové za účelem odhalování ny dešifrování vzorků ny korelací S učením ny uvažováním, které používají lidé.
Ankehitriny, ny rafitra dia misy ho an'ny rehetra. Inona no dikan'izany ho an'ny rafitra fanaraha-maso ho an'ny kintana ho avy? Na dia fitaovana iray tsy manam-paharoa aza i TensorFlow, dia afaka manatsara ny famoronana rafitra momba ny fitaovana enti-manentana, izay ho sarotra be ny fahatakarana sy ny fifandraisana. Afaka manintona ny saina amin'ny fanandramana amin'ny trambo matematika fa tsy ny fahatakarana ny fizotry ny fisainan'ny olombelona.
Ny tanjon'i TensorFlow dia ny fampivoarana ny rafitra fianarana amin'ny milina izay mitaky kalkilika maromaro, toy ny tambajotra tsy voajanahary. Ny olana eo amin'ireo rafitra ireo dia miankina amin'ny fahasarotam-pony - izy ireo dia ahitana tarehimarika an-tapitrisany izay sarotra loatra amin'ny fampiasana iombonana.
Ny rafitra fantsom-pahalalana dia ho lasa ampahany lehibe amin'ny fiainantsika amin'ny hoavy rehefa miantehitra amintsika hatrany hatrany ireo fanapahan-kevitra manan-danja. Ary rehefa fahaizana artifisialy rafitra manao fahadisoana (toy ny efa nitranga, ary tsy maintsy tsy maintsy atao), dia tsy maintsy ho afaka hahatakatra ireo hadisoana ary mifandray amin'ny rafitra mba hanitsiana ireo fahadisoana.
TensorFlow dia tranomboky rindrambaiko malalaka miasa miaraka amin'ny fahitana kanto. Tany am-piandohana dia novolavolain'ny olona avy ao amin'ny Google Brain Team. Navoaka ho tranokala misokatra ho an'ny daholobe izy izao. Google dia manantena ny hamorona vondrom-piarahamonina manodidina an'i TensorFlow mba handray anjara mavitrika amin'io tranomboky io. Ny TensorFlow dia azo ampiasaina hanoratana ny fampiharana ao C ++ na Python, saingy miaraka amin'ny fehezan-teny maimaim-poana, dia misy ny programming hafa hafa tsy ho ela.
← Minecraft Girls Music Band Band
CMS Themes, WordPress, WooCommerce, Drupal, Joomla, Magento, Blogger, PrestaShop, HTML, OpenCart, VirtueMart →
4K 2018 archivbox đi dji mavic dji mavic pro DJ phantom Đi Phantom 4 drôna drôna EMBA EMBA spol. S Ro malama baoritra hrad Haje nad Jizerou Jablonec nad Jizerou Giant Mountains Mountains kvadroptéra funicular baoritra litchi Lysa hora tia manao ski ambony Mavic mavic pro toerana fijanonana Paseky nad Jizerou phantom phantom 3 phantom 4 mandroso phantom mpamehy Rokytnice skipas hadilanana Ski ala nenina vakin'ilay sambo zavatra ilaina Video vohavoha ririnina avy any ambony Czech Paradisa